Dagaalyahanada Al Shabaab oo Gudaha Dalka Kenya ku Bur-Buriyay Anteenooyinka Isgaarsiinta (VIDEO)
December 13, 2016 – Wararaka Inaga soo gaaraya dalka Kenya ayaa sheegaysa, dagaalyahano loo malaynayo inay katirsan yihiin Ururka Al Shabaab ay bur buriyeen anteenooyin Isgaarsiineed oo ku yaalay deegaano ku dhow Degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Anteenooyinka ayaa la sheegay in Shabaabku ay ku xireen waxyaabaha qarxa, kadibna sidaasi ay ku bur-buriyeen, waxaana sidaasi xaqiijiyay Guddoomiyaha gobolka Mandera Fredrick Shisia.
Fredrick Shisia ayaa sheegay anteenooyinka la bur buriyay inay laheyd Shirkadda Safaricom, islamarkaana si aad ah deegaanka looga isticmaalayay.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale xusay in dagaalyahanadii Shabaaka in ay Afduubteen qaar ka mid ah shaqaalo kormeerayay xarumaha Shirkadda ee degmooyinka Ceel-Waaq iyo Sidoo kale Mandera.
“Waxaan xaqiijinaynaa in Al-Shabaab ay bur buriyeen Anteenooyin Isgaarsiineed oo ay laheyd Shirkadda Safaaricom ,islamarkaana Qadka taleefanada deegaanadaasi ay si weyn u xun yihiin.” ayuu yiri Fredrick Shisia.
Dowladda Kenya ayaa dhowr jeer oo hore ku eedeeysay dagaalyahanada Al-Shabaab in ay burburiyeen Anteenooyinka ay leedahay Shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee ku yaalla gobolka Ururka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.